गोप्य सहमतिले तर्साएर पार्टी अध्यक्ष ताक्दै प्रचण्ड! - Bidur Khabar
विदुर खबर २०७६ जेठ २३ गते २:१७
नुवाकोट जेठ २३, एकीकृत पार्टीमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको साझेदारी कस्तो होला? यो विषय तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता प्रक्रिया चल्दै गर्दा निकै चासोका साथ उठ्ने गरेको थियो। बेलाबखत प्रचण्डले नै आफ्ना अभिव्यक्तिमार्फत तरंग ल्याउने गरेका थिए।
जस्तो कि, २०७४ को चुनावी परिणाम आएको केही दिनपछि नै प्रचण्डले चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा खुलासा गरे, ‘प्रधानमन्त्रीका लागि आलोपालोको तरिका अपनाउने भन्ने सहमति सिद्धान्तत: भएकै हो। पार्टी एकता संयोजन समितिको छलफलबाट अन्तिम टुंगो लाग्छ।’
पाँचबुँदे सो सहमतिको चौथो बुँदामा उल्लेख छ– ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने।’
तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच यसअघि पनि भद्र सहमति पालना नभएको विगत भएकाले यो सहमति पनि पालना हुन्छ या हुँदैन, समयक्रममै थाहा होला। तर, सोही बुँदामा उल्लेख ‘आवश्यकता अनुसार’ भन्ने शब्दले भूमिका खेल्न सक्ने अनुमान गर्न कठिन छैन। उसै पनि भद्र सहमति पालनामा ओलीको ‘रेकर्ड’ राम्रो छैन। यद्यपि, गोप्य राखिएको भए पनि अहिलेको प्रसंग लिखित सहमतिमाथि हो।
‘मलाई प्रधानमन्त्री लिन बिलकुलै हतारो छैन’, प्रचण्डले भनेका छन्, ‘देशमा सुशासन र विकासले गति लियो र जनतामा सन्तुष्टि आयो भने मैले पार्टीलाई मुख्य रुपमा हेर्ने र अर्को अध्यक्षले प्रधानमन्त्री मुख्य रुपमा हेर्ने गरी काम मिलायो भने मलाई सहज हुन्छ।’
‘सरकार दिनप्रतिदिन अझ बढी लोकप्रिय कामहरु गर्दै अगाडि बढ्यो भने हामीले सहमति गरेको हुनाले नै प्रधानमन्त्री फेरिराख्नुपर्छ भन्नेमा म छैन’, आफ्नो गुह्य उनी खुलाउँछन्, ‘तर, एउटा नेताको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी पनि राम्रोसँग परिभाषित त हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने सरकारको नेतृत्व एउटा अध्यक्षले र पार्टीको नेतृत्व एउटा अध्यक्षले गर्‍यो भने सन्तुलनचाहिँ मिल्छ।’
‘यदि यी दुईमध्ये कुनै पद नदिइए के हुन्छ’ भनेर झाले गरेको प्रश्नमा अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, ‘त्यसपछि के हुन्छ, हामी हेर्दै जानेछौं। अहिले हामी पूर्ण इमानदार भएर अगाडि बढिरहेका छौं। म त्यही रुपमा नै अघि बढिरहेको छु। भारतीय नेतालाई पनि मैले यही भनेँ।’
तर, प्रचण्डले यस विषयलाई प्रसंगमा ल्याउन छाडेका छैनन्। भारतबाट फर्किएको केही दिनपछि (भदौ २४, २०७५ मा) बिबिसी नेपाली सेवालाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले फेरि यो विषयलाई उल्लेख गरे। अन्तर्वार्तामा उनले सहमति भए अनुसार सरकार नफेरिन पनि सक्ने र ओली नेतृत्वको सरकार पाँच वर्ष पनि जान सक्ने बताए। ‘तर त्यस्तो परिस्थिति एकताको बेलामा गरिएको समझदारी अनुसार हुँदैन। त्यो बेलाको परिस्थितिले माग गर्‍यो भने हामी जे गर्न पनि तयार हुन्छौं’, प्रचण्डले भनेका थिए।
धमलासँगको अन्तर्वार्तामा पनि उनले एकता गर्दा गरिएको सहमतिप्रति इमानदार हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘म अहिले कसैप्रति आशंका त गर्दिनँ। म के विश्वास गर्छु भने केपी ओलीले समय आएपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्न अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न। मैले लिन पनि अप्ठ्यारो मान्दिनँ’, उनले भनेका छन्।
तर प्रचण्डको अभिप्रायलाई सम्भवतः त्यसपछिको वाक्यले थप प्रस्ट्याउनेछ। जहाँ उनले भनेका छन्, ‘राम्रो काम भयो र पार्टीभित्र सहमति भयो भने उहाँलाई पाँचै वर्ष चलाउन दिन मैले पनि कुनै अप्ठ्यारो मान्दिनँ। उहाँले पार्टीको सञ्चालन तपाईंले राम्रोसँग गर्नुस् भनेर दिन अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन।’
तर ओलीले सरकार छाडेनन्। माओवादीले ताकेता गर्दा पनि सरकार नछाडेपछि उसले ओलीलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लियो। र, सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्यो। संसदमा बोल्दै प्रचण्डले भने, ‘नेपाली राजनीतिमा अब भद्र सहमतिको कुरा कसैले नगरोस्।’गोप्य वा भद्र जे भनियोस्; प्रचण्ड अहिले त्यही लागू गराउने प्रयत्नमा छन्।
स्रोत नेपाल लाईभ